Sawirro: Saciid Deni oo shaaciyay doorkii uu kulahaa Isbedelka doorasho ee ka dhacay dalka | Arrimaha Bulshada
Home English News News Sawirro: Saciid Deni oo shaaciyay doorkii uu kulahaa Isbedelka doorasho ee ka dhacay dalka
Sawirro: Saciid Deni oo shaaciyay doorkii uu kulahaa Isbedelka doorasho ee ka dhacay dalka
Bulsha:- Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Mudane Saciid Cabdullahi Deni ayaa maanta daah-furay kalfadhiga 50-aad ee baarlamaanka maamulkaasi, isaga oo khudbad dheer u jeediyey xildhibaanada golaha wakiilada Puntland.
Saciid Deni ayaa warbixin guud siiyey xildhibaanada Puntland, wuxuuna sidoo kale ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, tan Puntland iyo arrimaha abaaraha.
Madaxweynaha ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday doorashadii madaxweynaha ee 15-kii May, wuxuuna shaaca ka qaaday in Puntland ay qayb ka aheyd isbedelka ka dhacay dalka.
“Puntland waxay kaalin weyn ka qaadatay isbedelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka” ayuu khudbaddiisa ku yiri Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland.
Deni ayaa sidoo kale soo hadal qaaday doorashooyinka qof iyo codka ah ee hadda ka socda Puntland, wuxuuna sheegay inay ka go’an tahay taaba-gelinta hannaan dimoquraadiyad.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in degmooyinka harsan laga qaban doono doorashooyin dadweyne, sida Qardho, Ufeyn iyo EYL.
Dhinaca kale wuxuu si adag uga hadlay xaalufinta dhirta, isaga oo xusay in ka maamul ahaan ay la dagaalami doonaan dadka ku howlan jarista dhirta & kuwa ka ganacsada.
“Waxaa naga go’an la dagaalanka xaalufka deegaanka, dawladdu waxay isha ku haysaa kiiska dhoofinta dhirta,” ayuu markale yiri Saciid Deni.
Ugu dambeyn wuxuu ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada Puntland, isaga oo ku baaqay in si wadajir ah looga qayb-qaato gurmada socda ee loo fidinayo dadka tabaaleysan.